Vanhu vana vakakuvadzwa muBerlin kupfura
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Vanhu vana vakakuvadzwa muBerlin kupfura
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vanhu vana vakamhanyiswa kuchipatara nekukuvara zvakaipisisa mushure mekupfurwa mudunhu reBerlin muKreuzberg
Mapurisa ane zvombo akaendeswa uye kutsvagwa kwevanofungidzirwa parizvino kuri kuenderera padyo nechiteshi chepasi pevhu.
Sekureva kwemapurisa eBerlin nemapurisa emoto, chiitiko ichi chakaitika mudunhu reBerlin muKreuzberg mumaawa ekutanga eMugovera. Mutauriri wemapurisa akasimbisa kuti pakanga paine kupfura kwakasanganisira vanhu vakati wandei asi haana kupa rumwe ruzivo
Mune meseji yakatumirwa kuTwitter, vebazi remoto muguta vakati vanhu vatatu vaiswa muchipatara nekukuvara zvakaipisisa. Vaviri veavo vakaurayiwa vakawanikwa munzvimbo yematsotsi apo munhu wechitatu akadhonzwa kubva mugero repedyo nekukuvara pagumbo rake, Berliner Zeitung akataura. Mapurisa akazosimbisa kuti munhu wechina akakuvadzwa muchiitiko ichi.
Vezvenhau vemunharaunda, vachidonongodza nyaya dzevakaona, vakati vashandi vekuchengetedzeka vakapakata zvombo vakatumirwa kunzvimbo yekutsvaga avo vakapfura. Helikopta yechipurisa yakashandiswawo mukuita uku.
Zviremera zvichiri kuyedza kuona mamiriro ezvinhu akatungamira kupfura uku.